Ciidamada DF oo howlgalkii ugu cuslaa ka sameeyay duleedka Muqdisho | Warmaalnews.com
Ciidamada DF oo howlgalkii ugu cuslaa ka sameeyay duleedka Muqdisho
Muqdisho (warmaal news)-Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa xalay howlgalkii ugu cuslaa ee noociisa ah ka sameeyay deegaanka Ceelasha biyaha ee duleedka magaalada Muqdisho, iyadoo ciidamada kala duwan ee dowladda ay ka qeyb qaateen baaritaanka.
Baaritaankaan ayaa ahaa midkii ugu horeeyay oo sanado kadib ciidamada amaanka ay ka sameeyaan deegaanka Ceelasha Biyaha, waxaana baaritaanada oo kale inta badan laga sameyn jiray magaalada Muqdisho.
Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa baaritaan Guri guri ah ka sameeyay deegaanka, waxaana hal meel la iskuugu geeyay dhalinyarada ku sugan Ceelasha Biyaha, sida dadka deegaanka ay saxaafadda u sheegeen.
Xalay fiidkii ayuu howlgalka ka bilowday xaafadaha Ceelasha, waxaana uu idlaaday saqdii dhexe, iyadoo gabi ahaanba la joojiyay dhaqdhaqaaqa dadweynaha iyo gaadiidka inta howlgalka uu socday.
Ciidamada ayaa howlgalkaan oo kale habeen hore ka sameeyay Ceelasha, waxaana lagu soo qabtay keydkii Hubka Al Shabaab ay ku lahaayeen deegaanka, taasi ayaana keentay in baaritaan oo kale ay sameeyaan laamaha amaanka.
Saraakiisha ciidamada amaanka ayaa warbaahinta u sheegay in kala shaandheyn kadib ciidamada ay soo qabteen dhalinyaro lagu tuhunsan yahay inay Al Shabaab xiriir dhow la leeyihiin.
Dowladda Soomaaliya ayaa bishii hore ku dhawaaqday howlgalo cusub oo gaar ah oo ciidamada ay ka sameynayaan xaafadaha kala duwan ee Muqdisho, iyadoo hadda howlgalada ay gaareen duleedka Muqdisho.
Al Shabaab ayaa la aamisan yahay in qaraxyada iyo weerarada ay ka fuliyaan magaalada Muqdisho inay kusoo diyaariyaan duleedka magaalada Muqdisho iyo deegaanada ay kaga sugan yihiin Shabeelaha Hoose.